Kuongorora kweBhuku: Dathan Auerbach's 'Munhu Akashata: A Novel' iSouthern Gothic Therap - iHorror
musha Horror MabhukuFiction Kuongorora kweBhuku: Dathan Auerbach's 'Akaipa Munhu: A Novel' iSouthern Gothic Therap
FictionHorror MabhukuHorror Varaidzo Nhau
Kuongorora kweBhuku: Dathan Auerbach's 'Akaipa Munhu: A Novel' iSouthern Gothic Therap
yakanyorwa na Waylon Jordan September 2, 2018
Pane chimwe chinhu pamwe chete chisina kutya pamusoro paDathan Auerbach's Munhu Akaipa: Novel izvo zvakaoma kuisa mumashoko.
Zvinogona kunge kuti tarisiro yeayo chaiyo maratidziro ehuipi iguta diki rekutengesa. Zvingave izvo, kunyanya kune vedu isu vanogara munzvimbo dzekumaruwa dzeSouth, vatambi vacho vese vanoziva zvakanyanya. Zvingangodaro kuti wepakati mutambi, Ben, haasi iyeiye akajairika mhando yehumhare protagonist isu tinoona kazhinji kazhinji mumazuva ano anotyisa maanoveli.
Kana kuti pamwe, mubatanidzwa wezvinhu zvese izvi zvinouya pamwechete kuti zviunze kutyisa izvo zviri zvekunze kune zvatinoona zvinoita kuti titye zviso zvakajairika nenzvimbo dzatinoshanyira mazuva ese.
Gara mune nyorovera Florida panhandle, Munhu Akaipa, anodaro nyaya yaBen. Rimwe zuva Ben anotora munin'ina wake, Eric, kuenda naye kuchitoro kunotora zvinhu zvishoma.
Eric ane zuva rakashata munzira iyo vana vadiki vese vanoita nguva nenguva zvichikonzera kupenga kwehasha uye kurwadziwa. Uye ipapo chimwe chinhu chinotyisa chinoitika.
Ben anokundwa nemusoro unotsemuka pakarepo uye anovhara maziso ake kwechinguva chidiki. Paanovhura, Eric aenda, asi kwete kungoenda. Iye anyangarika zvachose uye hapana mumwe munhu muchitoro akatozviona.
Flash mberi makore mashanu.
Amai vokurera vaBen vava vega, vasingagone kubva pamba. Baba vake vari kudonha kumashure kumabhiri, uye kunyangwe Ben achiri kutsvaga hama yake mazuva ese, iye anofanirwa kutsvaga basa.
Nzvimbo chete yekuhaya?
Iwe wakazvifungidzira: icho chaicho chitoro chakatsakatika nemukoma wake makore ese apfuura.
Sezvo paanobatana nevashandi vehusiku vachirongedza masherufu uye kururamisa masekondi nehusiku, anotanga kuona kuti kunyangarika kwemukoma wake kunogona kunge kusiri iko kwega kwechiitiko muchitoro chisina kujairika nemukuru wepano. Kwete, kune huvepo, kunzwa, iyo inodarika iwo iwo masherufu akafanana uye inovanda mumumvuri kunze kwekuonekwa.
Auerbach's novel ndiyo yekutanga uye ine muenzaniso unokudzwa wenguva ino yekuSouthern Gothic kutaura. Hunhu hwake, sezvambotaurwa, ndezvechokwadi, uye hupenyu hwavo hwezuva nezuva hunorarama muvhu nemurombo.
Unogona kunyatso kunzwa ziya richiumburuka pasi musana wako pakati pemapendekete sezvo kupisa kuchirova pasi kubva kuzuva risina kunetsekana uye risingakwikwidzwe nemhepo diki inofefetera apo Ben anofamba achikwira nekudzika nemigwagwa midiki yeguta inotevera mirau inova inonetsa nezuva.
Tinonzwa kushungurudzika nekutya kwake sezvaanofanira kusangana nevarume nevakadzi vakarohwa pasi nehupenyu kwenguva yakareba zvekuti nzira yavo chete yekutaurirana inobuda mumashoko echisimba nezviito.
Tinokundwa nekupenga kwake paanomira pamberi pebhodhibhodhi ine ngura, inouraya mukamuri rekumusoro kwechitoro chine kuchema nekuchema zvinoita kunge kwevanhu.
Uye, dzimwe nguva, isu tinotonzwa hasha dzaBen dzino bata pane zvese izvi zvinhu.
Uye pasi pazvo zvese, Auerbach zvishoma nezvishoma inokanganisa muverengi nekugadzikana uye kukura kwekutya.
Iyi ndiyo mhando yenyaya yandinonyevera vanhu kuti vasadya mune imwechete. Pane zvinhu zviri mubhuku rino izvo munhu anoda nguva yekugadzirisa asati aenderera kuchikamu chinotevera kwete chete kuti aregedze kukundwa, asi zvakare kuve nechokwadi chekuti ruzivo haruna kupotswa.
Zvakavanzika zviri pakati pemashoko uye mukati memifungo ye vose muhupenyu hwaBen, uye dzimwe nguva ini, pachangu, ndainzwa ndichimanikidzwa nerimwe simba risingazivikanwe kuti ndimubatsire kuvazivisa.
Auerbach akafananidza naStephen King. Muchokwadi, vanopfuura mumwe vakaenzanisa Munhu Akaipa to Kupenya, uye ndinofunga kuti kuenzanisa kunoreva chokwadi.
Pane yakadzika, yakanyanya kupandukira, zvisinei, ini ndaizodaidza basa uye vatambi vazukuru vemweya vaCormac McCarthy uye Poppy Z. Brite, uye nditende kana ndati handina kumbofunga kuti ndinonyora iwo mazita maviri muchirevo chimwe chete.
Munhu Akaipa: A Novel inowanikwa ikozvino kuburikidza Amazon uye vamwe vatengesi vakuru vemabhuku mune ese akaomarara hard uye mafomati edhijitari.
Munhu Akaipa: NovelBook ReviewDathan AuerbachMaodzanyemba GothicWaylon Jordan
'Terminator 6' Inofambisa kuenda Zvishoma Pakutanga 2019 Kuburitswa Zuva
Cary Fukunaga Anotsanangura Nei Akaguma Asingatungamire iyo 'IT' Remake